Minisitry ny Fiarovam-pirenena: “Aoka tsy handeha amin’ny lalan-diso ianareo miaramila” | NewsMada
Minisitry ny Fiarovam-pirenena: “Aoka tsy handeha amin’ny lalan-diso ianareo miaramila”
Nazava ny tenin’ny minisitry ny fiarovam-pirena, ny jly Rasolofonirina Beni Xavier teny amin’ny Cemes Soanierana, omaly, nandritra ny lanonana fizarana mari-pakasitrahana ho an’ny miaramila nanaraka fiofanana momba ny serasera, manodidina ny fifidianana sy ny toetra tokony hasehon’ny miaramila.
Nilaza ny amin’ny hanatanterahan’ny miaramila ny asany ao anaty fahamendrehana mandritra ny fifidianana fihodinana faharoa izy. “Aoka ao anaty fahamendrehana sy fahendrena ny fiarovana ny filaminam-bahoaka. Ny fiarovana ny safidim-bahoaka ka tsy hitongilana amin-dRakoto na amin-dRabe”, hoy ny minisitra.
Mbola namafisiny ny amin’ny hoe: “Aoka tsy handrangitra, aoka tsy hifampiantsy, tsy hamafy vaovao tsy marina ary aoka hazaka ny fahalalahana mamosaka hevitra. Aoka isika hanaja ny kolotsaina repoblikana sy ny kolotsaina mahamalagasy. Tsy mendrika krizy intsony isika”. Anisan’ny mampanahy ny olona hatrany ny fisian’ny miaramila miandany amin’ny mpanao politika iray, indrindra rehefa mafana ny toe-draharaha politika eto amin’ny firenena. Zavatra efa misy rahateo izany hatramin’izay, ny miaramila mpomba ny filoha izao na izao. Izy ireto rahateo matetika milaza fa manana miaramila mpomba azy, miaro azy.
Tsy mahagaga raha tsy mahatoky azy ireo ny vahoaka matetika. Eo ihany koa ny fihoaram-pefy tato ho ato nahavoatonontonona miaramila. Ny fampiasana azy ireo amin’ny fakana fahefana sns.
Milaza ny hahay hiserasera ny miaramila
Nisy ny fiofanana ho an’ny miaramila sy mpiasa sivily miasa eo anivon’ny seraseran’ny minisiteran’ny foloalindahy niarahana tamin’ny ambasady sy miaramila amerikanina.
“Mino fa tao aorian’iny fiofanana sy fizarana traikefa nataon’ireo miaramila Amerikanina, tsy ho antsoina hoe “ grande muette” intsony no ilazana ny fianakaviambe ny foloalindahy, indrindra fa ny tompon’andraikitra ka hisy ny fiaraha-miasa amn’ny mpanao gazety sy ny mpikirakira serasera eo anivon’ny foloalindahy, etamazaoro jeneralin’ny tafika malagasy ary ny kaomandin’ny zandarimaria”, hoy ny minisitra.
Nahazo mari-pahaizana ireo 22 mianadahy nanaraka ny fiofanana ary entin’izy ireo manamafy ny fahaiza-manaony ny fiofanana narahiny, any amin’ny seha-piasain’izy ireo tsirairay avy. Heverina izany fa hisy ny vaovao mivoaka eny anivon’ny miaramila rehefa misy ny zava-mitranga.